वायुसेवा निगम ‘माफिया’ लाई दिन लागियो « Naya Page
काठमाडौं, २५ असार । सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल वायुसेवा निगम माफियालाई सुम्पन लागिएको भन्दै वायुसेवा निगमका कर्मचारीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् । कर्मचारीले संयुक्त ट्रेड युनियन संघर्ष समिति बनाएर सरकारले चालेका कदमको विरोध गरेका हुन् ।
‘यदि सही नियतले पब्लिकमा जान लागेको हो भने तयार भएको प्रबन्धपत्रमा सरकारको भूमिका किन प्रष्ट पार्न सकिएन ? किन ५१ प्रतिशत संस्थापक शेयरमा सरकारको नाम राख्न सकिएन ? कर्मचारीले भनेका छन्, निगमलाई निजिकरण गरिनबाट रोकिनु पर्छ ।’
भित्रभित्रै निगमलाई निजिकरण गर्ने थाहा पाएलगत्तै महाप्रबन्धकलाई जिज्ञासा राख्दा त्यसो नभएको जवाफ आएको, तर महाप्रबन्धककै हस्ताक्षर गरिएको प्रबन्धपत्र फेला परेपछि जिज्ञासा राख्दा काम अघि बढिसकेको भन्दै यस विषयमा जे मन लाग्छ गर भनेजस्ता जवाफ आएपछि संघर्षमा उत्रिनुपरेको कर्मचारीको भनाइ छ । समाचारपत्र दैनिकबाट